XISBIGA UMMADA OO CALAACAL, CABANAAN IYO CANBAAREYN MICIINSADEY BY LUULA ABDI
Aad baan idiin salaamayaa warbahinta qiimaha le:
Ururka Ummada wuxuu miciinsadaa canbaarayn Xukumada ah
,been abuur xisbiyada kale ah, calaacal warbaahinta ah, iyo cabanaan joogto ah.Waa waali daahira....Subxaan
Calaacalka uruka Ummada ka baxayaa wuxuu sheegayaa in ay tartanka ka quusteen. Cabanaanta heysaururka Umadda waa mid ka timi markay ogaadeen in laga taagero badanyey oo aanay sinaba kula tartami Karin Kulmiye, Wadani, Xaqsoor iyo Reys.
Gaboose ha ku quusto Mohamed Cabdillahi Omaar oo nin reer waqooyi ah in markuu xamar vote ka doontey uu kulu goa’y oo uu xabad ama hal vote oo keliya ka heley…ileyn khajilaad looma dhinto… Gaboose na waa nin Koonfur ku dhashey oo haduu doorashada deeganka gobalada oo dhan hal qof ka soo saaro isagaa ku bura sida. Nin waliba wadan uu u dhashey buu vote ka heli karaa ee meel aannu Gaboose ku dhalan kuna korin, waxna ku baran kuna bar baarin ha ka yaabin in uu vote ka helo.uruka Ummada waxay doonaan in ururada kalena xukuumada aflagaadeeyaan sidooda, waxayna isku sheegaan in ay yihiin mucaarad dhaba…. Horta urur mucaarad ma noqon karo ilaa uu National Party noqdo ee waa la iska kiin deynayaa in maxkamad la idinku geeyo ceyda Madaxweynaha ayey ahad.Ururka Ummada ciil iyo cadho badan baa ka muuqata oo waxay arkaan in ururadi qaar kood ay leeyiin taageero yaal badan iyo dhaqaale badan oo ka yimaada taageera yaashooda sida Ururka Wadani oo qurba jooga taageer sani ay si la mida sidii uu Kulmiye ku soo baxay aad iyo aad dibada looga taageero oo cid waliba ogtey. Xisbiga Wadani ilaa hada dhaqaalaha dibada looga sameeyey wuu dhaafey 10 Million oo dollar welina wey socotaa.
Hadaba hadaanuruka Ummada aannu heysan taageerayaal sidaas oo kale uugu heelan ha ogaadaan in aan meesha waxba u ool.
UrurkaWadani kuma qasbana in uu dowlada aflagaadeeyo oo weli xisbi mucaarad ah muu gaadhin sidaa darteedxil gaara oo ka saarani ma jiro wixii dhaliila ah Xisbi mucaarad ah markuu noqdo dabcan farata wuu ku fiiqayaa. ( Ururka Ummada waxa iskaga qasan macnaha Urur iyo Xisbi )Ee hadabauruka Ummada waxaan leeyey ee ceyda dowlada mooyee aan ku fikirin wax kale in aad Tartanka iskaga hadho ayaa kuu dhibaato yar hadii kale adoo liita baad tegi.
urukaUmmadu shaxda uu ciyaarayaa waxa weeye dowlada cey si aad hadhow marka ay xisbi u gudbi kari waayaan ay dowlada denbga saaraan. sidaana Xamar baa lagaga dhaqmo.Damn not in the Northern Region!